'Call of Aduty' dia mahavariana miaraka amin'ny hetsika 'The Haunting' vaovao sy ny New Zombies Mode - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Call of Aduty' dia mahavariana miaraka amin'ny hetsika 'The Haunting' vaovao sy ny New Zombies Mode
'Call of Aduty' dia mahavariana miaraka amin'ny hetsika 'The Haunting' vaovao sy ny New Zombies Mode
'Call of Aduty' dia lasa fombafomba amin'ny Halloween
by Trey Hilburn III Oktobra 9, 2021 387 hevitra
Halloween dia feno fomba amam-panao. Fantatrao, ireo zavatra kely izay ataonao ireo mba hahatonga anao ho tonga amin'ny fanahin'ny Halloween. Iray amin'ireo no lasa Call of Duty's hetsika Halloween isan-taona. Tamin'ny taon-dasa, nanasongadina tontolon'ny tontolo maizina misokatra izay misy zombie sy matoatoa mandalo azy, ho fanampin'ny mpilalao hafa izay mitifitra anao.
Ny fanenjehana an'i Verdansk dia hiverina amin'ny Call of duty ary tsy afaka miandry handavaka an'ity tontolo mampihoron-koditra ity isika.
Miaraka amin'ny hetsika Halloween, dia ny fanampiana hoditra vaovao roa. Amin'ity taona ity isika dia mandray a Donnie darko hoditra sy Ghostface avy any niantsoantso. Tamin'ny taon-dasa dia nanana Leatherface sy Billy the Puppet izahay.
Miaraka amin'ny Ny fanenjehana an'i Verdansk. Misy ihany koa ny maody Zombies vaovao mahafinaritra. Ity no toko farany amin'ny angano Zombies. Izany dia mitondra zavatra mankany amin'ny hetsika zombie miorina amin'ny iraka manerantany izay nampahafantarina antsika tamin'ny taon-dasa, na izany aza dia manampy mekanika sy fitaovam-piadiana vaovao ho an'ny famonoana olona izay manome traikefa lehibe.
Tena mihady ny lalao fanampiny aho. Ny hoditra tsirairay, miaraka amin'ny fitaovam-piadiany izay mifanentana amin'ny sarimihetsika persona. Ohatra, i Leatherface dia niaraka tamin'ny LMG izay nitovy tamin'ny valan-javaboary fianakaviana Sawyer hatramin'ny voalohany Texas Massacre.
Raha miditra an-tsehatra ianao izao dia azonao atao ny mijery ny zava-tsoa rehetra ary mametraka ny tenanao amin'ny fanahin'ny Halloween rehefa manana mpilalao hafa ao amin'ny Haunted Verdansk ianao.
Efa nitsambikina ve ianao? Ahoana ny hevitrao momba ny hetsika amin'ity taona ity? Ampahafantaro anay ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra Facebook sy Twitter anay.